Fitehirizana harem-pirenena :: Raiketina ho vakoka ny « Haute ville Antananarivo » • AoRaha
Fitehirizana harem-pirenena Raiketina ho vakoka ny « Haute ville Antananarivo »
Fiarovana ny lova ara-kolontsaina sy ara-boajanahary. Nanatanteraka fitsidihina araka asa, tetsy amin’ ny Tranombokim-pirenena Anosy ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy sy ny Vaomieram-pirenen’ny Sampandraharahan’ny Firenena Mikambana misahana ny vakoka sy ny kolon-tsaina (Unesco), omaly maraina. Nandritra izany no nahalalana fa hampidirina ho isan’ny vakoka iraisam-pirenena ny « Haute ville Antananarivo ».
Natao izany ho fampitoviana lenta an’ireo toerana mitsangana sy vao hatsangana eny amin’ny tanàna ambony eny. «Misy ny asa fanatsarana hatao, toy ny fampitoviana ny endriky ny trano eny, toy izany koa ny loko sy ny haavony », hoy ny minisitra. Marihina fa raha lasa vakoka ny tany na toerana iray, dia sarotra ny hahazoan’ny olon-tsotra azy na hangalarana azy, na hivarotana azy.
Manan-karena eo amin’ny vakoka sy ny kolon-tsaina ny Malagasy. Ankoatra ireo efa fantatra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, toy ny asa tanana Zafimaniry, izay efa nosokajian’ny Unesco ho vakoka iraisam-pirenena, dia manana betsaka eo amin’io vakoka ara-kolon-tsaina sy azo tsapain-tanana io isika. Manoloana izany, anisan’ny tetikasan’ny mi-nisitera ankehitriny ny hanaovana firaketana azy ireny. Natsidiky ny minisitra ihany koa fa hisy ny fametrahana pôlitika manokana hampiroboroboana ny kolon-tsaina. Eo ny fanomezan-danja ireo harem-bakoka tsy azo tsapain-tanana toy ny literatiora am-bava (kabary, sôva, isa.. .), ny hiragasy, ny fanorona, ireo dihy nentin-drazana …
Fifanankalozana ara-kolontsaina :: Handray an-tanana ny fanandratana ny fototra malagasy ny « Takalo Tsara »